Valve dia namoaka kinova beta vaovao an'ny Proton 3.16.6 | Avy amin'ny Linux
Valve dia namoaka kinova beta vaovao an'ny Proton 3.16.6
Nandritra izay roa taona lasa izay, Valve dia mavitrika amin'ny famatsiam-bola sy miasa amin'ny fanatsarana ireo fitaovana efa misy ho an'ny Linux, toy ny divay, izay manome ambaratonga mifanentana amin'ny lalao Windows.
Ny divay maimaim-poana sy ny fonosana CrossOver noforonina mifototra amin'ny CodeWeavers, no fitaovana ampiasaina betsaka indrindra mamela ny ankamaroan'ny lalao sy programa Windows (fa tsy ny rehetra) dia miasa amin'ny tontolon'ny Linux misy ambaratongam-pahombiazana maro karazana. Saingy matetika dia sarotra ny mampandeha tsara ilay rindrambaiko, na dia mampiasa interfaces rindrambaiko fancier toa an'i Lutris aza
vao haingana Valve dia namoaka beta vaovao amin'ny tetikasa Proton amin'ny kinova 3.16-6. Ho an'ireo izay mbola tsy mahalala momba Proton dia azoko lazaina aminao izany Izany dia miorina amin'ny zava-bitan'ny tetikasa divay ary mikendry ny hiantohana ny fandefasana ny rindran-dalao Linux namboarina ho an'ny Windows ary asongadiny ao amin'ny lahatahiry Steam.
2 Proton Beta vaovao
3 Ahoana no hizahako toetra Proton?
Proton dia mamela ny mpampiasa Linux handefa rindran-dalao izay tsy misy afa-tsy amin'ny Windows mivantana amin'ny mpanjifa Linux Steam.
Ny fonosana dia misy ny fampiharana ny DirectX 11 (mifototra amin'ny DXVK) sy ny 12 (miorina amin'ny vk3d), miasa amin'ny alàlan'ny fandikana ny antso DirectX mankany amin'ny Vulkan API, manome fanohanana nohatsaraina ho an'ny mpanara-maso lalao sy ny fahaizana mampiasa maodely efijery feno na inona na inona tohana. fanapahan-kevitra momba ny efijery amin'ny lalao.
Raha ampitahaina amin'ny kinova divay, ny fampisehoana lalao marolafy dia nitombo be.
Navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana BSD ny fivoaran'ny tetikasa ary nafindra tamin'ny divay tany am-boalohany sy ireo tetikasa mifandraika amin'izany, toa ny DXVK sy vk3d, raha vantany vao vonona izy ireo.
Ny sasany amin'ireo lalao sy rindranasa efa voasedra sy mandeha tsara amin'ity tetik'asa ity dia:
Proton Beta vaovao
Miaraka amin'ity doka vaovao ity de inona no antenaina amin'ilay ho lasa kinova farany Proton Ny fiasa vaovao lehibe amin'ny kinova beta an'ny Proton 3.16.6, miorina amin'ny kaody fototra 3.16 divay, dia:
Tolo-kevitra vaovao fampiharana ny XAudio2 API izay mamela ny kalitaon'ny feo avo kokoa amin'ny lalao sy manohana ny fiasa toa ny fampifangaroana ny feon-kira sy ny fiakaran'ny feo mandroso. Ny fampiharana dia mifototra amin'ny fivoaran'ny tetikasa open FAudio.
Ny mpamorona dia miasa amin'ny fanohanana nohatsaraina ho an'ireo motera tranonkala miorina amin'ny Chromium natsangana ho lalao.
Ankoatra izany, nanampy fanohanana ny gnutls 3.0+, izay namela hamaha olana maro mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny tambajotra amin'ny lalao.
Ny fanohanana ny lalao tambajotra dia napetraka ao amin'ny Hitman 2 sy Metal Gear Solid 5.
DXVK, ny fampiharana ny DXGI sy Direct3D 11 ao amin'ny Vulkan API, dia novaina ho amin'ny kinova 0.94, izay namaha ny olana sendra azy rehefa mihazakazaka lalao Anno 2205, Farming Simulator 2019, GTA V, Ni no Kuni II, Dishonored 2 ary Middle Earth: aloky ny ady.
Ao amin'ny toe-javatra dia nampiana ny fahaizana manery LARGE_ADDRESS_AWARE, izay manampy amin'ny fisorohana ny fahatsiarovana anao rehefa mihazakazaka lalao sasany amin'ny alàlan'ny Steam Play (oh: Bayonetta).
Ahoana no hizahako toetra Proton?
Raha te hanandrana ny vahaolana Wine Proton izy ireo dia tsy maintsy mametraka ny Steam Play beta ho an'ny Linux, na hiditra ao amin'ny Linux Steam Client beta. Satria misy dikan-divay an'ny divay novaina, izay (araka ny efa voalaza) dia antsoina hoe Proton.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manokatra ny mpanjifan'ny Steam izy ireo ary tsindrio ny Steam eo amin'ny zoro havia ambony ary avy eo eo amin'ny Settings.
Amin'ny kaonty dia ho hitanao ny safidy hisoratra anarana amin'ny kinova beta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Valve dia namoaka kinova beta vaovao an'ny Proton 3.16.6
Liftoff: lalao video racing drone miaraka amin'ny fanohanan'ny Linux